Chelsea oo diyaar la ah 80 million euro si ay u shaqaaleysiiso xiddig horey u soo xirtay maaliyada Man United – Gool FM
(London) 12 Dis 2019. Chelsea ayaa loo fasaxay inay suuqa kasoo iibsadaan xidigo kaddib in muddo ah uu ganaax ka saarnaa suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda.
Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ayaa dooneysa inay 80 Million kusoo qaadato weeraryahankii hore Manchester United, haatana ka tirsan safka kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha suuqa janaayo ee furmi doono sanadka cusub 2020-ka.
Haddaba Blues ayaa dooneysa in Zaha ay ka dhigato badalka xidigaha William iyo Pedro kuwaas oo u muuqda in waqtigoodii Chelsea uu sii dhamaanayo macalin Lampard ayaana doonaya in xiddigii hore kooxda Man United la keeno Chelsea billowga sanadka cusub.
Wilfried Zaha ayaa ku dhowaaday ku biirista kooxda Arsenal suuqii xagaaga balse xidiga reer Ivory Coast ayaa ugu dambeyntii iska sii joogay Crystal Palace.
Crystal Palace ayaa Zaha ka saxiixatay hishiis cusub sanadkii 2018 kaas oo gaaraya ilaa sanadka 2023-ka, laakiin Chelsea ayaa markan bar-tilmaameed koowaad ka dhiganeysa adeega laacibkan, iyagoo diyaar la ah inay ku bixiyaan qiimo dhan 80 Million oo Euro suuqa Janaayo ee sanadka cusub.